Slipknot Scream Park Tonga any Sacramento - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Slipknot Scream Park Tonga any Sacramento
Slipknot Scream Park Tonga any Sacramento
by Michele Zwolinski Septambra 2, 2015
nosoratan'i Michele Zwolinski Septambra 2, 2015
Fialamboly mivantana ary ny fotoana mety hatahorana ny piss-pataloha anao? Misaotra an'i Slipknot, satria mamokatra izy ireo Slipknot's Scream Park, hetsika maharitra iray volana manomboka ny 2 Oktobra ao Sacramento, CA. Hisy trano haitao telo samy hafa mampiavaka azy ny hetsika, samy natao ho an'ny "mpanatrika matotra fotsiny", ary koa fialamboly misy horonantsary mivantana amin'ny zoma sy asabotsy manomboka 16 oktobra. Ny 23 oktobra dia hampiantrano ny pre-party ofisialin'ny Aftershock Music ny valan-javaboary Fetibe.
Penynywise dia mitovy amin'ny antsika ihany
Ny ampahany tsara indrindra? Latsaky ny 100 $ ny tapakila. Raha ny marina, ny tapakila fidirana ankapobeny dia $ 25 fotsiny, ary ny tapakila VIP dia mitentina 40 $ fotsiny! Izy io dia mpivaro-kena voadio tanteraka, raha manontany ahy ianao. Ny tapakilan'ny hopper park dia azo alaina amin'ny $ 70, izay ahafahan'ny mpividy miditra amin'ny Slipknot's Scream Park sy ny zaridainan'ny rahavaviny, Fear Overload Scream Park any San Francisco isaky ny roa alina (miaraka amin'ny VIP).
Ireo trano telo manenjika ao amin'ny valan-javaboarin'i Slipknot dia misy ny “Miomana amin'ny Afobe”, ny “Clown's Playhouse”, ary ny “Ticket hoditra” Ny sambo teknolojia 3D an'ny Clown's Playhouse dia mampanantena ny hanana ny traikefa “manomboka amin'ny fihenan'ny valanoranony ka hatramin'ny fandavahana ny valanoranony” ary ny Skin Ticket dia fanandramana fahatapahana tanteraka amin'ny vondrona tsirairay omena jiro fotsiny rehefa manandrana mitady ny lalan-kivoahana izy ireo. Raha ny momba ny fiomanana amin'ny helo… dia, i HauntWorld no nampihorohoro indrindra tao California, noho izany dia tokony hahatonga anao ho afaka mandoto tena ianao.
Isaky ny tranokala, orana na mamirapiratra ny hetsika, maimaim-poana ny fijanonana eo an-toerana ary tsy mifarana raha tsy mandra-pahatongan'ny hetsika ny mpanjifa tokana rehetra dia nandalo ny fisarihana. Mety ho zaridaina misy lohahevitra any California izy io, saingy mety hiantso ny tenany hoe Ilay Tany Nampanantenaina.
Tiako ny maheno an'izay rehetra niaina izay nampanantena ahy ho fotoana mahafinaritra hiantsoantsoana. Ho antsika sisa, ity misy horonantsary ahafahantsika miaina amin'ny alàlan'ny fanoloana.
[youtube id = ”GLDq9ypT0K8 ″ autoplay =” tsia ”]
AftershockCorey TaylorTahotra be loatraHalloweenmanintona manenjikatrano manenjikafetibe mozikaSacramentoScream ParkSlipknot
Fanavaozana ny horonantsary horonantsary mampihoron-koditra tamin'ny taona 1988 novolavolaina
iHorror Te-handefa anao sy ny vahiny amin'ny Screening VIP an'ny "37 taloha"